Nagu saabsan - Dongguan Pretty Shiny Gifts Co., Ltd.
Hadiyadda Xirfadlaha ah & Alaab -qeybiye Sare
Waxaan nahay hormuudka alaab alaabta xusuusta birta ah, pinel pin & calaamado, billado, shilimaad adag, furayaasha furayaasha, summadaha bilayska, xirmooyinka & dhejiska tolka, lanyard, qalabka taleefanka, koofiyadaha, qalabka xafiisyada iyo alaabada kale ee xayeysiinta ah.
Yaan la kaashannaa?
Heerarkayaga ku saleysan mas'uuliyadda bulsheed-Hoggaaminta Hoose, Phthalate Bilaash ah oo gebi ahaanba saaxiibtinimo leh si loo buuxiyo heerka imtixaanka ururada caalamiga ah, oo lagu daray amniga shaqada iyo wanaagga xooggeeda gaarka ah, gaarsiinta degdegga ah, tayada caadiga ah iyo qiimaha tartan, warshadda Dongguan waxay leedahay waxay soo mareen hantidhawr waxayna oggolaansho ka heleen sumcado iyo shirkado caan ka ah adduunka, sida SEDEX, Disney, NBCUniversal, McDonald, Starbucks, Coca Cola iyo Bureau VERITAS.
Ma lihin wax xaddidan MOQ oo ku saabsan amarrada, waxaad ku dalban kartaa dalabkaaga wax kasta oo cabbir cabbir ah oo ku habboon baahiyahaaga gaarka ah.
Qaab -dhismeedka saxda ah, tikniyoolajiyadda xirfadda leh, farsamada gacanta oo taxaddar leh ayaa hubisa in alaabadayada la adeegsaday ay had iyo jeer la kulmaan codsiyadaada.
Iyada oo aan lahayn wax soo dejiyayaasha ama shirkadaha ganacsiga, waxaad naga heli doontaa qiimaha iibsiga tooska ah ee warshadda.
Iyada oo leh waayo -aragnimo ganacsi sanado badan, isgaarsiin wanaagsan iyo fahanka baahida macaamiisha, waxaan horay u qorsheynaynaa tallaabadaada xigta oo waxaan bixinnaa adeeg xirfadeed oo dhammaystiran.
2500 oo shaqaale ah oo lagu daray farsamaynta korantada/nadiifinta iyo habaynta midabaynta tooska ah, waxaad si buuxda noogu tiirsanaan kartaa welwelka dhalmada.
Adeegga Hal Joogsi
Laga soo bilaabo naqshadeynta, wax soo saarka, QC, xirxirida gaarsiinta, buuxinta dhammaan baahiyahaaga hal mar.
Si farxad leh u shaqee
Action Ficil gardaro ah